PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-10-21 - Kuzosikhuthaza ukutheleka kwabalandeli – Ncobeni
Kuzosikhuthaza ukutheleka kwabalandeli – Ncobeni
Isolezwe ngeSonto - 2018-10-21 - EZEMIDLALO - NHLANHLA SITHOLE
UJABULANI “Jezebel” Ncobeni, uhlaba ikhwelo kubalandeli baMaZulu lokuthi batheleke ngobuningi babo emdlalweni weTelkom Knockout abazowudlala neCapeTown City engompetha beMTN 8.
Lawa maqembu azodudulana eKing Zwelithini Stadium, uMlaza ngoLwesibili ngo 7.30 ebusuku.
Ngesizini edlule lezinkunzi zehlukaniselane amaphuzu emidlalweni ye-Absa Premiership.
Emlenzeni wokuqala eKapa AmaZulu aguqa ngo 1-0 elangena sekusele amanenjana emizuzwana edosheni likanompempe.
Ngemuva kwalo mdlalo lezi zinkunzi zizophinde zihlangane ngoMgqibelo emdlalweni weligi eCapeTown Stadium, eKapa ngo 8.15 ebusuku.
Kowempindamshaye Usuthu lwadlula ngehubo lika 2-1 nokwaba umphumela owalufaka kwiTop 8 ngaphambi kokuthi lukhishwe ngenxa yesinqumo sasemahhovisi amakhulu.
Ngesizini edlule Usuthu lwakhishwa yiKaizer Chiefs kulo mqhudelwano nathi kulokhu bazobe bedlalela enkundleni yabo abangake hlulwa kuyona.
“Ngicela abalandeli boSuthu bathele ngobuningi babo bezoseseka njengoba behlale benza emidlalweni yeligi. Lo mdlalo wangoLwesibili ubaluleke kakhulu kithina njengoba ngesizini edlule sadlala neChiefs saphuma ekuseni. Ngakho ukubakhona kwabo ngobuningi kuzosikhuthaza kakhulu ngoba sizimisele ngokuhamba ibanga elide kulomqhudelwano kule sizisini,” kusho uNcobeni.
Ebuyela ngamalungiselelo nesimo sonke seqembu uthe: “Konke kuhamba kahle njengoba nesizini siyiqale kahle nakuba kukhona okwenzekile ngaphandle kwenkundla esingangeni kukhona ngoba bakhona ababhekene nakho. Thina okwethu ukuqikelela ukuthi sidlala kahle ngaso sonke isikhathi.” Uqhuba uthi ngesizini edlule abadlalanga kahle kulomqhudelwano njengoba babedlala neKaizer Chiefs eMoses Mabhida Stadium nokwekuwumdlalo waMakhosi.
“Kulokhu sidlalela enkundleni yethu eMlaza ngakho sifuna ukuqhubeka nokudlala kahle kuyona. Sidlala nompetha ngakho kubalulekile ukuthi sidlale ibhola lethu esilijwayele ukuze sinqobe kulo mdlalo,” kuqhuba uNcobeni.
Ephawula ngokungabonakali kwakhe emidlalweni embalwa yokuqala kwesizini uthe akukho obekungahambi kahle ngaphandle kokuthi umqeqeshi ubesazama enye inhlanganisela.
“Ukungabonakali kwami emidlalweni yangaphambili akusikhona ukuthi bekukhona okungahambi kahle kodwa ngicabanga ukuthi umqeqeshi ubesafuna ukunika ithuba abanye ukuze abone ukuthi bamphatheleni. Nami wanginikeza ithuba elifanayo ngalibamba ngazo zombili,” kubeka uNcobeni.
Uthi kubalulekile ukuzilungeselela ngendlela okuyiyona ngoba alikho iqembu ongalibukela phansi kwiPSL.
“Awukho umdlalo okufanele uye kuwona ngomqondo wokuthi udlala nethofi, kuyona yonke imidlalo kufanele sidlale ngokuzimisela ukuze sizuze imiphumela emihle,” kusonga uNcobeni.
AmaZulu selokhu agcina ngo1992 ukufinyelela kowamanqamu awunqobayo lo mqhudelwano usabizwa ngeCoca Cola Cup ngaphansi kukaClive Barker owabe elekelelwa nguFred “Junior” Njiyela.
UKHAMA Billiat ozodlala umdlalo wakhe wokuqala wabaKhaya baseSoweto Izithombe: BACKPAGEPIX UXOLA Mlambo ongomunye wabadlali bePirates okulindeleke asize ezakhe ziwole wonke amaphuzu
UJABULANI Ncobeni okhuthaza abalandeli ukuthi bazobakhomoza emdlalweni wabo abazodlala kuwo neCape Town City eKing Zwelithini Stadium Isirhombe: BACKPAGEPIX